Soo dejisan IrfanView 4.54 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaMuuqaal sawir lehIrfanView
Qeybta: Muuqaal sawir leh
Bogga rasmiga ah: IrfanView
IrfanView – software ah si aad u eegto iyo edit sanamyadii. software la badi qaababka graphic shaqeeya oo waa inay awoodaan inay tiraa audio iyo video qaabab waaweyn. IrfanView ayaa qalabka tafatirka aasaasiga ah si ay nuqul ka, cut, shaandheyn images, ka beddeli size, iwm software The u saamaxaaya in ay isticmaalaan saamaynta kala duwan, gelin watermarks iyo dar qoraalka si ay u images. IrfanView ku jira set ah filtarrada si ay ula qabsadaan ku barbardhigo iyo iftiin ee sawirada. Sidoo kale IrfanView kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo images galay qaabab kale graphic in hab Dufcaddii ah.
Taageerada ugu badan oo ka mid ah muuqaallo kale, audio iyo video qaabab
saamaynta badan oo
Cod iyo Muqaal
processing Dufcaddii of files ah
Soo dejisan IrfanView
Faallo ku saabsan IrfanView
IrfanView Xirfadaha la xiriira
Software si ay u maareeyaan ururinta ee photos iyo qalabka video. Sidoo kale software ka bixisaa fursadaha ah goobidda iyo ballaaran oo fudud si loo farsameeyo files.
Muuqaalka Sawirka Deg-degga ah ee loo yaqaan ’FastStone Image Viewer’ – oo ah barnaamij lagu daawado, wax ka beddelo oo la beddelo sawirrada. Software-ka wuxuu taageeraa qaababka garaafyada waaweyn wuxuuna leeyahay howlo badan oo kaladuwan.